चितवन मेडिकल कलेजमा कलेजो सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण
गृहपृष्ठ » फिचर » फोटो फिचर » चितवन मेडिकल कलेजमा कलेजो सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण
बिहिबार ३१ असार, २०७८
फिचरफोटो फिचरमुख्य समाचारहरुस्वास्थ्य
काठमाडौं । चितवन मेडिकल कलेजमा कलेजो प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक भएको छ ।
जाजरकोट जिल्ला कुशे गाउँपालिका–९ का ४७ वर्षीय भरतविक्रम शाहीको कलेजका चिकित्सकले अठार घण्टा लगाएर शाहीलाई कलेजो प्रत्यारोपण गरिएको हो ।
कलेजद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कलेजका कार्यकारी निर्देशक प्रताप देवकोटाले शाहीलाई उहाँकी धर्मपत्नी कमलादेवीले ६० प्रतिशत कलेजो प्रदान गर्नुभएको थियो ।
प्रत्यारोपणमा भारतको एपोलो अस्पतालका विषेशज्ञ चिकित्सकको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यकारी निर्देशक देवकोटाका अनुसार सिरोसिस् अफ लिभरको सी चरणमा पुगेका बिरामीलाई कलेजो प्रत्यारोपण गरिएको हो ।
काठमाडौँमा कलेजोको जाँच तथा उपचार गराउँदै आउनुभएका शाही दुई साताअघि मात्रै चितवन मेडिकल कलेज आउनुभएको जनाइएको छ ।
सिरोसिस् अफ लिभरको ‘ए’ ‘बि’ ‘सि’ चरणमध्ये शाही ‘सी’ चरणमा पुगेको जनाउँदै डा यादवले भन्नुभयो, “गत फागुनमा ‘सि’ चरणमा पुग्नुभएका शाहीलाई प्रत्यारोपण नगराएको भए थप जीवन रहन मुस्किलपर्ने अवस्था थियो ।”
शाहीका पेटमा पानी भरिएको र ठूलो भएको थियो ।
उहाँले भन्नुभयो “अल्कोहलका कारण कलेजो बिग्रिएको त थियो नै, हेपाटाइटिस ‘बि’ पनि बिरामीमा थियो ।”
कलेजलो दाता कमलादेवीको स्वास्थ्यमा सुधारपछि उहाँलाई यही असार २७ गते नै अस्पतालबाट घर पठाइएको छ ।
शाहीको स्वास्थ्य अवस्था सुधार हुँदै गइरहेको चिकित्सक यादवको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेकै गतिमा सुधार भए आगामी साता उहाँलाई समेत घर पठाउन सकिने अवस्था छ ।” उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “दुई देखि तीन महिनामा दुबै जनामा कलेजोको अवस्थामा वृद्धि भएर ९० देखि ९५ प्रतिशत पलाएर आउछ । उहाँहरू दुबै जना सामान्य जीवन बिताउन सक्नुहुन्छ ।”
पत्रकार सम्मेलनमा हेपाटोलोजी डा पौडेलले प्रत्यारोपणका क्रममा झण्डैं १३ युनिट रगत खर्च भएको जानकारी दिनुभयो । सो कलेजले दोस्रो प्रत्यारोपण सफल गरेको हो । उहाँले अघिल्लो प्रत्यारोपणमा एक÷दुई युनिट रगतले नै पुगेको बताउनुभयो ।
चर्चित गायिका इन्दिरा जोशीले गरिन् इन्गेजमेन्ट, को हुन् शरद केडिया ?
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टीम स्वदेश फिर्ता
पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाहले गरिन् जानकी मन्दिरमा पूजाअर्चना
भरतमणि पौडेल बने ‘कमेडी च्याम्पियन’ सिजन २ को विजेता
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार, को हुन् नयाँ मन्त्रीहरु
एकीकृत समाजवादीले गर्यो पार्टी कार्यालय उद्‍घाटन, मासिक भाडा कति छ ?
ओमानले नेपाललाई पाँच विकेटले हरायो
एमसीसी उपाध्यक्ष फर्केको भोलिपल्ट विप्लव नेकपाले गर्यो विरोध प्रदर्शन
एमालेका पूर्व सहयोद्धाहरु सकेनन् छुट्न
अध्यक्ष प्रचण्ड–एमसीसी उपाध्यक्ष सुमारबीच एक घण्टा भेटवार्ता
नियालेर हेर्नुहोस् यो तस्विरमा के देख्नुहुन्छ, यसले के सन्देश दिन्छ ?
६ जनाको सामूहिक नरसंहार, लोकबहादुरको बयान सुन्दा झस्कियो प्रहरी